Uwenza njani umfanekiso onamabinzana akhuthazayo okanye wenze ikholaji | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ULaura Carro | | Izixhobo zoYilo, Ukuphefumlelwa, Photoshop
Kule tutorial siza kufunda ngokufanelekileyo utyale umfanekiso ukusuka kwifayile enye emva koko uyincamathisele kwenye, njalo njalo fumana ukwenziwa okuhle. Emva koko sinokwenza umfanekiso okhuthazayo, kunye namabinzana akhuthazayo, okanye ikholaji elula evakalelwa intle emehlweni.
Namhlanje lusuku lokuqala sivelise ezethu izizathu, jonga kwesi sifundo se-flash.
Ukuqala, kwi-Photoshop kufuneka sivule imifanekiso emibini (okanye nangaphezulu) esifuna ukusebenza ngayo.
Inyathelo elilandelayo liqukethe cofa isixhobo sokukhetha ukuba siziva sikhululekile, kwimeko yethu sikhethe isixhobo umlingo wand kuba umfanekiso wethu unomfaniswano kwaye kulula ukususa imvelaphi. Kuxhomekeke kumfanekiso owukhethileyo, kuya kuba lula okanye kube nzima ngakumbi, kodwa ngomonde unokuhlala ufumana.
Ukuba unayo ingxowa-mali efana neyethu, emva koko sikuxelela ukuba ngakumbi ukunyamezela unika ukhetho, ngcono kuya kuza kuwe. Ngokufanayo, ukuba sisusa ukhetho kwibhokisi ethi "kufutshane"Kwangelo xesha linye sikhetha umbala esiwufunayo, siya kwenza njalo kumhlaba wombala ofanayo owahlulwe kuwo.
Kwimeko apho kufuneka sikhethe indawo, singasebenzisa isitshixo ukutshintsha njengendlela emfutshane for yongeza olunye ukhetho. Ngaphandle koko, ukuba siyafuna susa into esingafanele siyikhetheEmva koko siya kusebenzisa isitshixo Alt mzuzu wokucofa.
Kuba apha sikhetha imvelaphi, kwaye sifuna ukusebenzisa oonobumba, emva koko sisebenzisa umyalelo Ctrl + Shit + I ukuguqula ukhetho, okanye ukusilela oko, kukhetho-lokuguqula ithebhu.
Okokugqibela siyikopa (Ctrl + c) kwaye siyincamathisele komnye umfanekiso (Ctrl + v)
Nje ukuba umfanekiso unamathiselwe kwenye, sinokuwubeka kwindawo esithanda kuyo ngokucofa kunye nokutsala.
Njengoko ubona, ngamanye amaxesha xa umfanekiso ukwingqangi yombala ofanayo, ulahlekile. Ukusombulula le ngxaki incinci sinelinye iqhinga elikhawulezayo ukuba sifuna ukukunika iinkcukacha ezongezelelweyo, kwaye que ibonakale ngakumbi.
Ukwenza cofa kabini kumaleko womfanekiso sifuna ukuhlela, i-popup iya kuvela ngeendlela ezininzi zokongeza. Kule meko siza kusebenzisa ukhetho Ukukhanya kwangaphandle. Siza kushiya umbala ovuthayo umhlophe, kwaye sandise, njengoko kubonisiwe ekubanjweni. Ngoko sinako bhetele ufunde isicatshulwa emfanekisweni, kwaye emva koko siya kuba nembonakalo yokuqala kuyo.
Ngoku kukuwe ukuba wenze owakho umfanekiso okhuthazayo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Yenza umfanekiso odityanisiweyo